संखुवासभा जिल्ला अस्पतालमा पहिलोपटक इन्डोस्कोपी सेवा – Health Post Nepal
संखुवासभा जिल्ला अस्पतालमा पहिलोपटक इन्डोस्कोपी सेवा
२०७६ भदौ ४ गते १४:३३
संखुवासभा जिल्ला अस्पताल, खाँदबारीमा इन्डोस्कोपी सेवा सुरु भएको छ । पेटसम्बन्धी बिरामी बढ्दै गएको अवस्थामा अस्पतालले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेटबाट इन्डोस्कोपी मेसिन खरिद गरेको थियो । पहिलोपटक इन्डोस्कोपी सेवा सञ्चालनका लागि मेसिन खरिदमा अस्पतालले २० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
सेवा सरु गरेकै दिन अस्पतालबाट १५ जना बिरामीले इन्डोस्कोपी सेवा लिएका छन् । यसले अस्पतालमा सेवाको माग उच्च रहेको संकेत गर्छ । ‘जिल्ला अस्पतालमा इन्डोस्कोपी सेवा सुचारु हुनु खुसीको कुरा हो,’ अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. लक्ष्मण खड्का भन्छन्, ‘सेवा सुचारु भएकै दिन हामीले १५ जनाको इन्टोस्कोपी गरेका छौँ ।’
अस्पतालमा इन्डोस्कोपी सेवाको शुभारम्भ वीर अस्पतालका वरिष्ठ ग्यास्ट्रोलोजिस्ट तथा पूर्वनिर्देशक डा. भूपेन्द्र बस्नेतले गरेका थिए । अस्पतालमा इन्डोस्कोपी सञ्चालनका लागि दक्ष जनशक्ति उपलब्ध नभएकाले आइतबार र सोमबार बिरामीमा इन्डोस्कोपिक जाँच गरेर डा. बस्नेतले सेवा सेवा सुचारु गराएको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. खड्काले जानकारी दिए ।
सेवा सरु गरेकै दिन अस्पतालबाट १५ जना बिरामीले इन्डोस्कोपी सेवा लिएका छन् । अस्पतालमा इन्डोस्कोपी सेवाको शुभारम्भ वीर अस्पतालका वरिष्ठ ग्यास्ट्रोलोजिस्ट तथा पूर्वनिर्देशक डा. भूपेन्द्र बस्नेतले गरेका थिए । अस्पतालमा इन्डोस्कोपी सञ्चालनका लागि दक्ष जनशक्ति उपलब्ध नभएकाले आइतबार र सोमबार बिरामीमा इन्डोस्कोपिक जाँच गरेर डा. बस्नेतले सेवा सेवा सुचारु गराएको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. खड्काले जानकारी दिए ।
‘आमासयसम्बन्धी ताथा सानो आन्द्राको पहिलो भागमा रहेको रोग पहिचान गर्न इन्डोस्कोपीले सहयोग आवश्यक हुन्छ । यस प्रविधिबाट अल्सर, क्यान्सर भएको समेत सहजै थाहा पाउन सकिन्छ,’ डा. बस्नेतले भने, ‘खाना निल्न गाह्रो हुने, बान्ता हुने, मुखबाट रगत आउने भएमा समस्या पहिचान गर्न यो प्रविधि बढी उपयोगी हुन्छ ।’
इन्डोस्कोपी मेसिन चलाउन अस्पतालले एकजना चिकित्सकलाई तालिम दिइरहेको डा. खड्काले बताए । ‘आगामी दिनमा उहाँलाई नै करारमा राखेर सेवा सुचारु गर्ने योजना छ,’ खड्काले भने । ५० बेडमा सञ्चालनरत अस्पतालमा ओपिडी आस्कमिक, एक्स–रे, ल्याब, सुरक्षित गर्भपतन, एचआइभी, टिबीको जाँच र उपचार, शल्यक्रियामार्फत प्रसूतिलगायत सेवा उपलब्ध छन् ।
संखुवासभा जिल्ला अस्पताल